ikpeazụ Friday, na European Central Bank (ECB) ulo oru mbụ ozugbo ugwo ọrụ ARO ekpuchi 19 so n'Òtù nke euro na mpaghara, na-enwe olileanya na-ndú na mobile ugwo na Europe na ọrụ a, na na ọtụtụ technology Refeyim na US na Asia. Ọgụ ka a ahịa. Nke a ARO-nyeere ozugbo ugwo ọrụ ga-n'ọtụtụ ebe na-akwalite ofụri Eurozone, mgbe EU so mba’ na-eji ọkụ na ulo ga-mezue mobile azụmahịa ịkwụ ụgwọ ole na ole sekọnd kama na-egbu oge site na netwọk na-enyefe dị ka ha nwere n'oge gara aga. Na onu nke ụgwọ.
ARO Aims na-enye ala-ego ozugbo niile na Euro ahịa gafee Afrika. Eurozone akụ ahịa ga-enwe ike ịnweta ARO 24 awa ụbọchị na-enwe mfe na ala ịkwụ ụgwọ - yiri Venmo na United States.
ARO is a ọhụrụ ahịa akụrụngwa ọrụ that the ECB launched this month. Ọ na-enyere ugwo na enye ọrụ na-enye ndị ahịa ha na o nyefee ego na n'ezie na oge na gburugburu elekere, ụbọchị ọ bụla nke afọ. Nke a pụtara na ekele ARO, ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ ga-enwe ike nyefee ego n'etiti onye ọ bụla ọzọ n'ime sekọnd, irrespective nke mmalite awa nke ha ụlọ akụ.
ARO na-mepụtara ka ndọtị nke TARGET2 na ga-dozie ego na akụ etiti ego. Ọ bụ ezie na ha kwuru na na mmalite, ARO ga naanị dozie ugwo na-enyefe na euro e ikpe ahụ, bụrụ na nke ina, ndị ọzọ ego nwere ike na-akwado nakwa.
Ụfọdụ n'ime uru nke usoro ga-agụnye mba kacha nta anwu n'oge na azụmahịa usoro na ihe ijuanya eziokwu banyere ozugbo ugwo usoro bụ na ọ na-enye ohere ego ka biri na ụlọ akụ n'oge ọ bụla na-eke ihe niile na-oge niile ohere usoro.
Alleged Ripple partner and Pan European infrastructure, Target ntabi Ịkwụ Ụgwọ Bi wee na-ebi ndụ bụ isi nzube nke na-eke ihe ozugbo ugwo usoro nile Europe na iji akụ etiti ka a ọwa mezie nyefe nke ógbè eme nnyefe nke dijitalụ ego gafee ókè na Europe dị ka a dum. Na dị ka 'ozugbo ugwo mmezi' okwu bụ mmasị na ọrụ, multiple amaghị isi mmalite kọrọ na ha agakwuruwo Ripple blockchain.
Ụfọdụ na-ahụ nke a dị ka mmalite nke ọgwụgwụ kaadị akụ: centralized oru na-anabatakwa ihe ịma aka jụrụ site kaadị na na-na-amalite ime ihe. ndị ọzọ na-, Otú ọ dị, see it as Ná ekwe maka kaadị.
The otu ihe n'aka. Nke a na-bụ ihe dị mma ka cryptocurrencies na decentralization. N'ezie, ọ pụrụ ịbụ na a game-changer maka Ripple si dị iche iche ugwo teknụzụ n'ihi na e nwere ihe ịrịba ama na ARO ike mejuputa Ripple teknụzụ dị ka xCurrent, xVia, na xRapid n'ọdịnihu.
The mbụ na nke abụọ na-kwadoro site Ripple, while the third is powered by the XRP digital token. Ọ bụ omume na Atụmatụ ga-ahu nagide ụfọdụ ma ọ bụ ndị a niile teknụzụ ikwado ọnụ ala mba ịkwụ ụgwọ. The reason is that Ripple has partnered with TAS Group that has several important partnerships with banks in Europe.
Ya ọhụrụ version nke ha Bank liquidity Management n'elu ikpo okwu na-kpọmkwem iji na-enye kacha interoperability na ARO ugwo ọkọlọtọ. Banks nwere ike iji TAS Group si Bank liquidity Management Platform na seamlessly aga ọhụrụ ARO ugwo protocol.
Gịnị Mere ARO Yiri kaadị?
ARO na-arụ ọrụ a yiri ụzọ ugwo nyiwe ka Ripple si xCurrent. na ARO, ugwo na enye ọrụ na-chọrọ na-ewepụta a òkè nke liquidity na obodo ha akụ etiti. Nke a liquidity ga-eji dozie ịkwụ ụgwọ n'otu ntabi na-enweghị na-eche ugboro, 24 awa ụbọchị na 365 ụbọchị a afọ.
The end-na-ọgwụgwụ nhazi oge site na mmalite nke azụmahịa na njedebe na-atụ anya ga- 10 sekọnd ma ọ bụ obere. The usoro ugbua nwere atụmatụ na ebe n'ọtụtụ ihe n'ụzọ dị irè izute mkpa nke ọrụ.
ECB Executive Board Member Benoît Cœuré kọwara uru ARO na a okwu mbụ nke afọ a:
"N'ezie, na euro ebe, ebe dị iche iche iwu frameworks na ahịa àgwà emeri, e nwere mgbe a ize ndụ nke ọhụrụ fragmentation ịda site na mmepe nke mba ma ọ bụ mechiri emechi-akaghị ngwọta nke na-adịghị interoperable. Ịrụ ụka a n'ihe ize ndụ, na European ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ na-ugbu a launching a n'ezie pan-European ozugbo ịkwụ ụgwọ atụmatụ. "
E nwere ihe abụọ na atụmatụ nke ARO nke ga-enyere ya nweta reachability gafee dum Europe. First, ARO dabeere na SEPA ntabi Ebe E Si Nweta Nyefee (SCT Inst) - a na atụmatụ maka pan-European ozugbo ịkwụ ụgwọ, atụ anya ga-eji a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ịkwụ ụgwọ ndị na enye ọrụ na Europe. Nke abụọ, ARO ga-mepụtara ka ndọtị nke TARGET2, nke ugbua nwere ọtụtụ ihe netwọk nke sonyere na Europe.
Ọ bụ ezie na ọ ga-eji euro maka mmezi, a ga-abụ otu n'ime ihe ndị kasị dị ịrịba ama milestones na ike ime na euro technology banyere ụwa nke dijitalụ ego. Ntunye aka nke Ripple blockchain bụ ma na-enen, but the nodes match quite well. (Seabreeze Smart Card Co., Ltd.)
Na Mbụ: Akwado NFC ịkwụ ụgwọ, ibe na labelụ emeputa ozugbo-erite uru